ကျနော်နဲ့ မန်းဂေဇက်ရဲ့ စည်းကမ်းချက် အမှတ် ၁၃ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » ကျနော်နဲ့ မန်းဂေဇက်ရဲ့ စည်းကမ်းချက် အမှတ် ၁၃
ကျနော်နဲ့ မန်းဂေဇက်ရဲ့ စည်းကမ်းချက် အမှတ် ၁၃
Posted by San Hla Gyi on Nov 16, 2012 in Complaint / Claim, Ideas & Plans, Think Different, Think Tank | 44 comments
အမှန်တော့ ဒီစာကို ကွန်မန့်ပေးဖို့ ရေးရင်းနဲ့ နည်းနည်းရှည်သွားလို့ ပို့စ်အနေနဲ့ သီးသန့်တင်လိုက်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဦးနှောက်ကို မုန်တိုင်းတိုက်လိုက်တယ်ဗျာ။
ကိုရှုံးနိမ့်မှုများနဲ့လူက စည်းကမ်းချက် အမှတ် ၁၃ ကိုပြောတာ မြင်လို့ ကျနော်လဲ စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ ဝင်ပါလိုက်တယ်ဗျာ။ အဲဒီ စည်းကမ်းချက် ၁၃ ကိုပြောချင်တာ ကြာပြီ။ ကျုပ်က ကျုပ်အမြင်ကို ပြောမယ်။ မကျေနပ်သူက ချေဖျက်နိုင်တယ်။ ကျုပ်ကလဲ ပြန်လည် ချေဖျက်ဆွေးနွေးမယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့။ အဲဒီ စည်းကမ်းချက် ၁၃ အကြောင်းပြောချင်တာ ကျနော်ရေးတဲ့ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် (၁၈) တိုင်းရင်းသားအရေးသို့ ပြန်ကြားချက်နဲ့ ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေးတဲ့
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နဲ့ ပါစင်နယ်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကတည်းကပဲ။ ကျုပ်အမြင်နဲ့ တချို့လူတွေ အမြင်တူမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်စိတ်ထင် အဲဒီစည်းကမ်းချက်ကို တွင်တွင်ပြောနေသူတွေတောင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နဲ့ ပါစင်နယ်ကွဲပုံမရဘူး။
မန်းဂေဇက်ကို မူတည်ပြီး ပြောမှာဆိုတော့ မန်းဂေဇက်ဟာ သိကြတဲ့အတိုင်း စာတွေရေးတဲ့ နေရာဆိုတော့ ဒီနေရာမှာ ဒီစာရေးတဲ့ အဓိကအလုပ်ဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကျန်တဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ပြင်ပဘဝတွေက ပါစင်နယ်လို့ ကျုပ်သတ်မှတ်တယ်။ သဘောမတူတဲ့လူ ဆွေးနွေးနိုင်တယ်။
အဲဒီ စည်းကမ်းချက်အရ “Member တဦးသည် အခြား Member အပေါ် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ မှတ်ချက် ထင်မြင်ချက်ပေးရန် လုံးဝ (လုံးဝ) အခွင့်မရှိ” လို့ရေးထားတယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီတော့ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ ဒီမန်းဂေဇက်က ဘာလုပ်တဲ့ နေရာလဲ။ စာပေဝါဿနာ ပါသူတွေ စာတွေရေးတဲ့ နေရာ မဟုတ်လား။ ခင်ဗျားတို့ထဲမှာ တချို့က ဆရာဝန် အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းဆရာ ကုန်သည် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိကြမှာပေါ့ဗျာ။ အဲဒါ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ ဘဝတွေ မဟုတ်လား။ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ နိုင်ငံခြားမှာနေသူ မြန်မာပြည်မှာနေသူ အမျိုးမျိုး ရှိမယ်ပေါ့။ အဲဒါလည်း ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ အခြေအနေပဲ။ အဲဒါကို မှတ်ချက်ပေးခွင့် မရှိဘူးလို့ဆိုရင် လက်ခံတယ်ဗျာ။
အဲ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ ဘဝတွေကို စာပေမျက်နှာပေါ်တင်ပြီး ရေးပြီဆိုရင်တော့ ရေးသူကိုယ်တိုင်က ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ပါစင်နယ်ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိုင်းထဲကို ဆွဲထည့်လိုက်ပြီဗျ။ ဝေဖန်သူက ဝေဖန်ရင် စည်းကမ်းချက်အမှတ် ၁၃ကို မပြောနဲ့တော့ဗျို့။ အဲဒါ ဝေဖန်သူက ခင်ဗျားတို့ရဲ့စာကို ဝေဖန်နေတာ သူက တကယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်။ ပြောခံရသူသာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နဲ့ ပါစင်နယ်ကို မခွဲတတ်တာဗျ။ စဉ်းစားကြည့်လေ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ ဘဝကို တဘက်လူက သိတယ်ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင် ရေးလို့သာပေါ့။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ တမင်ကို စုံစမ်းပြီး ရေးတာဆိုရင်တော့ သူဟာ အောက်တန်းကျသူပေါ့။ ဒီမှာတော့ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင် ရေးကြတာပါ။
ဒါဖြင့် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ ဘဝကို မရေးရတော့ဘူးလား ဆိုရင် ရေးချင်သပဆိုရင် ရေးနိုင်တာပေါ့ဗျာ။ ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်းဆိုရင် တသက်တာမှတ်တမ်းဆိုတဲ့ စာအုပ်ကြီး ရေးလိုက်တာ အလွန်ခမ်းနားခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် မမေ့နဲ့နော်။ ဆရာကြီးက သူကောင်းတာရော မကောင်းခဲ့တာရော ညံ့ခဲ့တာရော သေသေချာချာ ရေးခဲ့တာဗျ။ သူ့တပည့် စာရေးဆရာကြီး သော်တာဆွေလဲ ကျနော့်ဘဝဇတ်လမ်းစုံ ဆိုပြီး ရေးခဲ့တာ နာမည်ကျော်ပြီး အကြိမ်ကြိမ် ပုံနှိပ်ခဲ့ရတာပဲ။ အဲဒီမှာလဲ ဆရာကြီး သော်တာဆွေက သူပွေခဲ့တာတွေကိုပါ ရေးခဲ့တာ။
ဒီမှာ တချို့လူတွေ ရေးကြတာတော့ ငါဘယ်လို သုံးဖြုန်းခဲ့တာ ဘယ်ဆိုင်မှာ သွားစားခဲ့တာ ဘယ်ကောင်မလေးနဲ့တွေ့တာ စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ နောက်ပြီး ကျုပ်က နထို့ပလို့မြို့မှာ နေပါတယ်ကွယ်။ သူကတော့ တောင်ပုလုမြို့မှာ နေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့နေတဲ့ အာတာလွတ်မြို့ကတော့ ကျုပ်နေတဲ့ နထို့ပလို့တို့ တောင်ပုလုမြို့တို့လောက်တော့ မချမ်းသာပါဘူး စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်တို့ ဆွေတွေ မျိုးတွေ ကောင်းစားခဲ့ကြတာ တကယ့်ကို ဆွေကြီး မျိုးကြီး ချိုကြီး နားရွက်ကားတွေပါ ဘာညာပေါ့ဗျာ။ ခပ်ကြွားကြွားလေးပေါ့။
ကိုယ့်ရှိလို့ ကိုယ်ကြွားတာကိုတော့ မနာလိုစရာ မရှိပေါင်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း တဘက်လူက ကိုယ့်ရဲ့ စာထဲကလေသံကို သိလို့ အဲဒီစာကို ဝေဖန်ရင်တော့ အဲဒါပါစင်နယ် တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်တော့ဘူးဗျ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စာကို ဝေဖန်တာ။ ဝေဖန်သူက ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရေးတဲ့လူကတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နဲ့ ပါစင်နယ်ကို မကွဲသူပဲ။
တော်တော်များများလဲ ဝေဖန်ခံရတဲ့ လူတွေကို ကြည့်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ ပါစင်နယ်ဘဝကို ကိုယ်ရေးနေတဲ့ စာထဲ ခပ်ကြွားကြွားလေးရေးလို့ အဝေဖန်ခံရတာဗျ။ သာမန် ရိုးရိုးသားသား ကိုယ့်ရဲ့ အကြောင်းကို ရေးလေ့ရှိသူတွေ ဝေဖန်ခံရလေ့ မရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖတ်သူက စာထဲကနေ ရေးသူရဲ့ စိတ်ထားကို မြင်သွားလို့ပဲ။(အမှန်တော့ ကျနော့်အမြင် ခပ်ကြွားကြွားရေးလေ့ ရှိသူလဲ သိပ်မရှိပါ။ အနည်းငယ်သာ ရှိနိုင်ပါသည်။)
အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ကျနော်ဟာ ဒီနေ့အထိ ကျနော့်ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ ဘဝကို စာထဲထည့်မရေးပါဘူး။ သာမန်အကြောင်းအရာလောက်က လွဲရင်ပေါ့။ အဲဒီတော့ ဘယ်သူမှ ဝေဖန်ခွင့် မရှိဘူး။ ဝေဖန်သူကိုလဲ ပါးပိတ်ရိုက်မယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်။ ဘယ်လို ရိုက်မှာလဲ မမေးနဲ့။ အွန်လိုင်းပေါ်က ပြောင်မြောက်တဲ့ စကားလုံးတွေသုံးပြီး ပါးပိတ်ရိုက်မှာ။ ဟဲ ဟဲ အလကား နောက်တာပါဗျာ။ မလုပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်ချင်လဲ လုပ်မယ်ပေါ့။
အဲဒီလို့ပဲ သူများကို ကိုယ်ကဝေဖန်လို့ သူများက ကိုယ့်စာမှာ ပါနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြန်ပြီး ဝေဖန်မယ် ကိုယ့်ရဲ့ ရေးပုံသားပုံကို ဝေဖန်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါလည်း လုံးဝ လုံးဝ အရမ်း အရမ်းကို professional ဖြစ်ပါတယ်ရှန် အဲလေ ဗျာ။ လုံးဝ ပါစင်နယ် တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စာကို ဝေဖန်တာပါ။ မဟုတ်ဘူး ဆိုရင်တော့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေါ့။ ဟုတ်နေရင်တော့လည်း ခံလိုက်အုံးပေါ့။
ကဲ ဒါပါပဲ အဲဒါ ကျုပ်မြင်တဲ့ စည်းကမ်းချက် အမှတ် ၁၃ ပဲ။ ဆွေးနွေးလိုသူတွေ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်လဲ အချိန်အားလေးတွေမှာ ပြန်ဆွေးနွေးပါမယ်။
အသေးစိတ် ထပ်မန့်ပါမယ်လို့ ကတိပေးပါရဲ့ဗျာ
သိပ် ပြောချင်ရက်လက်တို့တော့ပစ် ဖစ်နေတာမို့ပါ
အိပ်လိုက်အုံးမယ် အစ်ကိုရာ. တာ့တာ
ကို Inz@ghi ရေ
အခုလို လာရောက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ခင်ဗျားဆွေးနွေးသလို ကျနော်ကလဲ ပြန်ဆွေးနွေးပေးပါမယ်။ သိပ်မဆုံဘူးပေမယ့် စာတွေအရ စိတ်ချင်းနီးစပ်နိုင်တယ် လို့ကျနော် ခန့်မှန်းပါတယ်။ ကျနော် အခု ကျန်လူတွေကို ပြန်ဖြေလိုက်အုံးမယ်။ ကျနော့် ဆိုလိုရင်းကို သဘောကော ပေါက်ကြရဲ့လား မသိဘူး။
မပူပါနဲ့။ ကျုပ်က စိတ်ရှည်လက်ရှည် အမုန်းခံပြီး ရှင်းပြပါမယ်။
ကိုစံလှကြီးရေ…ကျနော်တော့ လွှမ်းမိုးသီချင်းလေးသွားသတိရမိပါတယ်…။ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲရှိတယ်…ကျနော်တို ရပ်ကွက်ထဲမှာဒီလိုပဲ….ရွာထဲမှာလဲ ဒီလိုပဲပေါ့လေ…စာဖတ်သူအနေနဲ့ စာရေးသူကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဝေဖန်တာက လွှဲလို့၊မိမိရဲ့ အမြင်အယူအဆ၊အတွေးအခေါ်တွေကို ကြိုက်သလိုဝေဖန်တာကို အပြည့်အ၀လက်ခံပါတယ်…။
လောကကြီးမှာ တအူတုံဆင်း၊တမိထဲမွေးခဲ့တဲ့ သူတွေတောင် သူတို့ရဲ့အသိအမြင်၊အတွေးအခေ၊ါ်အယူအဆနဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေမတူလို့၊ဘ၀နေထိုင်မူ အဆင့်အတန်းတွေလည်းမတူညီပါဘူး၊။။။။
မိမိရဲ့ခန္တာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ခြေချောင်း၊လက်ချောင်းတွေတောင် အတိုအရည် မညီနိုင်သေးတာ၊အတွေးအခေါ် အယူအဆ ဆိုတာတော့ ဘယ်တော့မှ တူညီနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး….
ဟတ်ကောင်ဇော်ဂျီ မင်းဘိုးအေဂျီးငါဆိုတဲ့ကောင်က ဂျပန်မာစတာဆိုတာကို
( ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ကျုပ်လည်းသိဘူး အဘိုးကြီးကလျှောသွားတာကြာပေါ့ )
ဒါ့ကြောင့် မင်းသူများကိုယ့်ကို ပါးပတ်ရိုက်တာတော့ ဘယ်တော့မှမခံခဲ့နဲ့ဒဲ့
သူနေတဲ့ရပ်ကွက် မီးမှန်လို့ မီးမှန်တယ်ရေးတာရေးပါစေ သမိုင်းဆရာကြီးရယ်
ကိုမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ဘု ကိုတော့ ပထမဆုံး ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဗျာ။ ကျန်လူတွေကိုလဲ ပြန်ဖြေပါမယ်။ ကိုယ်နေတဲ့ရပ်ကွက် မီးမှန်တယ် ဆိုတာ ပြောခွင့်ရှိပါ့ဗျား။ ဒါပေမယ့် အခုလို ပြောကြည့်မယ်။ “ကျုပ်နေတဲ့ နထို့ပလို့မြို့ကတော့ ဒီမိုကရေစီမြို့ကြီး ပါကွယ်။ ခင်ဗျားတို့ နေတဲ့ မြန်မာပြည်ကတော့” အဲဒီမှာ စတွေ့တာပဲ။ စကတည်းက ရေးသူဟာ ဖတ်သူကို နှိမ့်ချချင်တဲ့ စိတ်ထားရှိတယ် ဆိုတာ တဘက်လူက မြင်သွားပြီလေ။ အဲဒီတော့ ဟာ ဒီကောင်က ငကြွားကြီးပါ သူ့ရေးတာက ဘယ်လိုဆိုပြီး ဝေဖန်ရင် မရှင်းနိုင်ရင် ခံလိုက်ပေအုံးတော့။ ကိုအောင်ဘုရေ ကျုပ်ပြောသလို လူမမြင်ရပေမယ့် စာတွေထဲကနေ စိတ်ထားကို သိနိုင်ပါတယ်ဗျား။
ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်ကို ဝင်မန့်ဝင်ဝေဖန်တဲ့သူတွေကို ကျွန်တော့်ကို တစ်ချိန်မှာ
နိုင်ဂန်ကြော် စာရေး ဆြာဂျီး
ဖြစ်တာမြင်ချင်လို့ ဝိုင်းဝန်းမြေတောင်မြှောက် အဆိုးအကောင်းတွေသင်ပြပေးတယ်လို့ပဲမြင်ဘာဒယ်။
အခု ကွန်မန့်ကတော့ ကိုသုညနဲ့ ကို Thu Wai အတွက်ပါ။ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ကွန်မန့်က ခပ်ဆင်ဆင် တူတာမို့ နှစ်ယောက်စလုံးကို ပေါင်းဖြေလိုက်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ကွန်မန့်က စာဖတ်သူ အနေနဲ့ စာရေးသူကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဝေဖန်တာကလွဲလို့ မိမိရဲ့ အမြင် အယူအဆတွေကို ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့် ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျနော့် ဆိုလိုချက်နဲ့ လွဲနေတယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ ဝေဖန်တာကို လက်မခံဘူးလို့ မပြောပါဘူး။ အမှန်အတိုင်းဆို ကျနော်ရဲ့ အယူအဆ အတွေးအမြင်တွေကို ဆွေးနွေးရင် သူများတွေထက် ပိုတတ်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်က စည်းကမ်းချက်တခု ဖြစ်တဲ့ Member တဦးသည် အခြား Member တဦးအပေါ် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ မှတ်ချက် ပေးခွင့်မရှိ ဆိုတာပါ။ ဒီလို အွန်လိုင်းပေါ် စာရေးတဲ့ နေရာမှာ တဘက်လူက တဘက်လူရဲ့ personal life ကို ဘယ်လိုလုပ် သိနိုင်မှာလဲ။ တကူးတက လိုက်ပြီး စုံစမ်းမယ့်လူက လွဲရင် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ပြောမှသိမှာပါ။ ဒီမှာ သိကြတာလဲ ကာယကံရှင်က ပြောလို့သာပါ။ စုံစမ်းတဲ့ နေရာမှာ စကော့တလန်ယာဒ်လောက် တော်တဲ့လူတော့ မပြောတတ်ဘူး။
အဲဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ပြောလိုက ပြောနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာလဲ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို အတ္ထုပတ္ထိအနေနဲ့ ရေးပြီး နာမည်ကျော်သူတွေထဲမှာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ နာမည်ကြီးသူတွေ အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် မမေ့ပါနဲ့။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ကိုယ်ရေးနေတဲ့ စာမျက်နှာပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ကစပြီး personal ကို ကိုယ်စာရေးတယ်ဆိုတဲ့ professional လိုင်းပေါ်ကို တင်လိုက်ပါပြီ။ အခု မန်းဂေဇက်မှာတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာရေးသူတွေ အားလုံး ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ ဒါပေမယ့် စာရေးတဲ့ နေရာဖြစ်လို့ ဒီနေရာရဲ့ အဓိက professional အလုပ်ဟာ စာရေးခြင်းပါပဲ။
အဲဒီတော့ သူများက ကိုယ်ရေးထားတဲ့ စာထဲက ကိုယ့်အကြောင်းတွေကို ဝေဖန်ရင် ဝေဖန်သူက ပါစင်နယ် တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကိုယ့်စာထဲက အကြောင်းကို ဝေဖန်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ စည်းကမ်းချက်နဲ့ ငြိတယ်လို့ အော်လို့ မရတော့ပါဘူး။ အခု ဖြစ်နေတာက ကိုယ်ကစပြီး ကိုယ်ဘယ်လို ချမ်းသာကြောင်း ဘယ်လိုသုံးဖြုန်းနိုင်ကြောင်း လျှောက်ရေးပြီး သူများက ဝေဖန်တော့မှ စည်းကမ်းချက်နဲ့ ငြိတယ်လို့ ထင်နေကြတာပါ။ ကျနော့် အမြင်အရ စည်းကမ်းချက်နဲ့ မငြိပဲ အရမ်းကို professional ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာလဲ စာပေဝေဖန်ရေးဟာ ကြီးမားတဲ့ အခန်းတခုလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ဆန်ရင်းနာနာဖွတ်ရတယ် ဆိုတဲ့ ကို Thu Wai အတွက်ပါ။ ဆန်ရင်းနာနာဖွတ်ဖို့ ဖွတ်တဲ့လူကကော ဘယ်လောက် စင်းလုံးချောနေလို့လဲ။ လုပ်ချင်သပဆိုရင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မမေ့နဲ့နော်။ နေရာတိုင်းမှာ သက်ရောက်မှုအတွက် တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ်က သူများကို အပြုသဘော မဆောင်ပဲ ဝေဖန်ရင် ကိုယ့်ကို ဝေဖန်ရင်လဲ ခံနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီစည်းကမ်းအပေါ်..ရွာသူားတွေဘယ်လို အမြင်ရှိကြသလည်း.. သိနိုင်တာပေါ့..
ပါးရိုက်ခံရဲသူတွေ.. အဲ..အဲ.. စိတ်ဝင်စားသူတွေ.. ဆွေးနွေးစေလိုကြောင်းပါခင်ဗျား…။ :harr:
ကျနော့်အမြင်အရ သူကြီးမင်းရဲ့ စည်းကမ်းက ဝေဝါးနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျနော်ပြောချင်တဲ့ အဓိက အချက်က ကိုယ့်ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ ဘဝကို မှတ်ချက် ထင်မြင်ချက်ပေးတာ မခံချင်ရင် ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ personal life ကို ရေးနေတဲ့ စာမျက်နှာပေါ် တင်မလာပါနဲ့။ အဲဒီလိုဆို ဘယ်သူမှ မှတ်ချက်ပေးလို့ မရသလို တမင်စုံစမ်းပြီး ပေးသူဆိုရင်လဲ အတော့်ကို အောက်တန်းကျလို့ ပါးတောင်ရိုက်ပစ်သင့်ကြောင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ပြောပေးတာပါ။ ကျနော် ဆက်ပြောထားတာ ရှိပါတယ်။ ဘယ်သူမှတော့ ပါးရိုက်လို့ မရလို့ ပြန်ပြီး စကားလုံးတွေနဲ့ ဝေဖန်ရင် စည်းကမ်းချက်နဲ့ ငြိတယ်လို့ မအော်ဖို့ပါ။
ပုံမှန် ရိုးရိုးသားသား ကိုယ့်အကြောင်းကို ရေးသူကိုတော့ ဘယ်သူမှ မဝေဖန်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီကလူတွေ အားလုံးလဲ ၃ နှစ်သားကလေး တယောက်မှ မပါလို့ ခပ်ကြွားကြွားလေး ရေးလို့ ဖတ်သူက ဝေဖန်ရင် ပါစင်နယ်လို့ မအော်ဖို့ပါ။
ဒီအချက်က ကျနော့်ရဲ့ မူလချည်တိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ သူကြီးပြောတဲ့ စကားအရ ကျနော့်ဆိုလိုချက် လွဲသွားနိုင်လို့ ထပ်ပြီး highlight လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ကာ ကိုစံလှကြီးရေ… ကျွန်တော်တို့ တစ်ခါမှ မဆွေးနွေးဖူးဘူးထင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်က ခုမှ ၃၀ တန်းဆိုတော့ အနှစ် ၃၀ လောက်လေးနဲ့ ကိုယ်မြင်တာ၊ ကိုယ်သိတာတွေကို ပြောပြမှာပဲလေ..
ကိုစံလှကြီးပြောတဲ့ ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတွေကို ချပြတဲ့အထဲမှာ ကျွန်တော်လဲ ထိပ်ဆုံးကပါမယ်ထင်ပါတယ်… သို့သော် ကြည့်ရတာ ကိုစံလှကြီး မဖတ်ဖူးသေးဘူးထင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်ရေးတာ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ရေးတာပါ… ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့ရာဘ၀ကို အရှိအတိုင်း ရေးပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. ကိုစံလှကြီးက ဘယ်သူ့ကိုပြောမှန်းတော့ မသိဘူးပေါ့လေ.. ရည်ညွှန်းတဲ့ လူစားမျိုးလည်း ဒီဆိုက်ထဲမှာ မရှိဘူးမဟုတ်ဘူး၊ ရှိပါတယ်..
လိုရင်းလေးဆက်ဆွဲလိုက်ရမယ်ဆိုရင် ကိုစံလှကြီး ဟိုဘက်ပို့စ်မှာ ပြောထားခဲ့လို့ ဒီထိလာဖတ်ကြည့်တာပေါ့… ဖတ်ကြည့်တော့လဲ သိပ်တော့ မရှင်း မရှင်းပဲဗျ… ဘာပြောချင်မှန်းသေချာမရဘူး.. အဲဒီဘက်မှာ ကျွန်တော်က စည်းကမ်းချက် အမှတ် ၁၃ ကြောင့် အနုတ်ပေးတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်အရပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ဘယ်သူပေးတယ်ဆိုတာကိုပါ သိစေချင်လို့ တရားဝင်ထုတ်ပြောတာပေါ့… ဆိုတော့ အကြောင်းရှိတယ်ဗျ
နံပါတ်(၁)အချက်က ဒီရွာထဲမှာ နောက်ကွယ်ကနေ အပေါင်းအပါစုံလင်စွာနဲ့ တူရာတူရာစုပြီး လုပ်ကြံနေတာတွေလဲရှိတယ်.. မရှိဘူးတော့မပြောပါနဲ့.. ကိုစံလှကြီးထက်အရင် ဒီဆိုက်မှာ ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ရေးသားနေခဲ့တာပါ.. ဒီတော့ ဘာမြင်မိလဲဆိုတော့ လက်သီးပုန်းထိုးခံရတာ တော်တော်ဆိုးတယ်.. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က ဘာကြောင့်၊ ဘယ်သူကလုပ်တယ်ဆိုတာ သိစေချင်တာတစ်ကြောင်း
နံပါတ်(၂) အချက်အနေနဲ့ဆို ဒီရွာထုံးတမ်းအစဉ်အလာလို ဖြစ်နေတဲ့ တစ်ယောက်ကစပေးလိုက်ရင် တစ်ရွာလုံး လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာပြီး ငြင်းကြခုန်ကြတာ ငြင်းခုန်ခြင်း အနုပညာတစ်ရပ်အနေနဲ့ ဆိုက်ထဲကလူတွေကို ပြန်မထွက်စေနိုင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုလို့လဲ ကျွန်တော်မြင်တယ်.. ဒီနေရာမှာတော့ ပြောစရာလေးတွေရှိလာတယ်… မတူညီတာတွေပေါ့၊ ကိုယ်သဘောထားကွဲလွဲတာလေးတွေ၊ ကိုယ်ယုံကြည်ရာတွေကို ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အကိုးအကား၊ အထောက်အထားတွေနဲ့ ငြင်းနိုင်သလောက် ငြင်းကြပေါ့၊ တူရာတူရာစုဖွဲ့ပြီး စာတွေပြန်လှန်ချေပရေးသားကြပေါ့.. ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော်တို့စာရေးပြီဆိုကတည်းက လမ်းဘေးကလေကချေတွေ ငါ့စကားနွားရပြီးရော၊ အဂါဝရဖြစ်စေမယ့်အသုံးအနှူန်းတွေ၊ လူပေါ့သွမ်းတွေရဲ့ စကားလုံးတွေကို စာစီပြီးပြောတာတော့ အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်တယ်.. ဥပမာပေးရမယ်ဆို ဘပုပြောတဲ့စကားတွေကြည့်.. လူတစ်ယောက်ကို ပါယ်ပါယ်နယ်နယ် အားပါးတရပြောတာပဲ… ဒါပေမယ့် သူ့မှာ ပညာသားပါပါပြောတတ်တယ်.. ရိုင်းတယ်ထင်ရတဲ့စကားလုံးကိုတောင် လူတစ်ကာလက်ခံနိုင်မယ့် ရှုထောင့်တစ်ခုကနေပြောတယ်..
ဆိုတော့ လိုရင်းချုပ်ရမယ်ဆိုရင် ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ခြင်းမှာ ထိုက်သင့်တဲ့ အဆင့်အတန်း၊ ယဉ်ကျေးမှုလေးတစ်ခုတော့ ရှိသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်… ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်ယုံကြည်ရာတစ်ခုကို ရဲရဲဝန့်ဝန့်ချပြမှာပဲ… မှန်တာ၊ မှားတာတော့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာမှာပဲ..
ခင်ဗျားနာမည်ကလဲ ရှုံးနိမ့်မှုများနဲ့လူ ဖြစ်လိုက် စိုင်းကွမ်းခေးဖြစ်လိုက်နဲ့ ကျနော်တော့ မျက်စိလည်တယ်။ အရင်တုန်းက အရှုံးတွေနဲ့ ကျွန်တော်ဆိုတာလဲ ခင်ဗျားလား အခြားတယောက်လားတော့ မသိဘူး။ ထားလိုက်ပါ။ ခင်ဗျားက ဖတ်ကြည့်တော့လဲ မရှင်း မရှင်းဆိုတော့ ဘယ်လို ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ ကျုပ်စိတ်ထင် ရှင်းတဲ့လူကတော့ ကွန်မန့်တောင် ရှင်းရှင်းကြီး ပေးထားပါလား။ ကျုပ်လဲ ဒီထက် ရှင်းအောင် ပြောရရင်တော့ ဒဲ့ပြောဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။ အဲဒီ ရှင်းတဲ့လူတွေရဲ့ ကွန်မန့်တွေလဲ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါအုံး။
နောက်ပြီး ခင်ဗျားကို ပြောချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်က ဒီစည်းကမ်းချက်ကို ခင်ဗျားတို့နဲ့ ကျုပ်အမြင်မတူတဲ့ သဘောထားကိုပဲ ပြောချင်တာ။
ခင်ဗျားနဲ့ ကျုပ်အမြင်မတူဘူးဗျ။ ကျုပ်အမြင်အရ ခင်ဗျားက စည်းကမ်းချက် ၁၃ ကို နားလည်တဲ့ နေရာမှာ ကျုပ်နဲ့ မတူဘူး။ ခင်ဗျား မကြိုက်တဲ့ ကွန်မန့်ကို အနီပေးတာလဲ ခင်ဗျားရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးပါ။ ကျုပ်မကန့်ကွက်ပါဘူး။ ခင်ဗျား ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်ရေးတာလဲ ကျနော် အပြစ်မတင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရေးတဲ့လေသံ ရှိသေးတယ် မိတ်ဆွေကြီးရေ။
ဥပမာဗျာ ခင်ဗျားက ဒီလိုရေးမယ် ဆိုပါတော့။ “ကျုပ်စိုင်းကွမ်းခေးဟာ မြန်မာပြည်က elite ဆိုတဲ့ အခွင့်ထူးခံ မိဘနှစ်ပါးမှ ပေါက်ဖွားခဲ့သူပါကွယ်။ ကျုပ်မိဘတွေဟာ မြန်မာပြည်မှာ လူ့မလိုင်တွေပါ။ ကျုပ်တို့ ညီအကို မောင်နှမတွေဟာလဲ ဆရာဝန်တွေ အင်ဂျင်နီယာတွေ လေယာဉ်ကတ်ပီတန်တွေ မန်းနေးဂျင်း ဒါရိုက်တာတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မချမ်းသာသူတွေဟာ ကျုပ်တို့လို မကြိုးစားခဲ့လို့ပါ။ ဒီတော့ တွေးတောကြစေလိုပါတယ်ကွယ် ဌဲလျောင်း ဌဲလျောင်း” အဲဒီလို ရေးလိုက်တာနဲ့ ဖတ်သူက ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်ထားကို နားလည်သွားပြီဗျ။ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားကို ဟား ဟား ငကြွားကြီးလို့ ဝေဖန်ရင် အဲဒီလူက ကျုပ်အမြင်အရ ပါစင်နယ် တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်တော့ဘူး။ သူက ခင်ဗျားရေးတဲ့ စာကိုဖတ်ပြီး ခင်ဗျားကို ဝေဖန်နေတာ။ သူက တကယ့်ကို professional စည်းထဲမှာ။ အဲဒါ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ မှတ်ချက် မဟုတ်တော့ဘူး။ ခင်ဗျားက အဲဒါ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ မှတ်ချက်လို့ ပြောရင် သူကလည်း ခင်ဗျားကို ဒါဆိုဘာလို့ ကိုယ့်ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကဘဝကို professional လိုင်းဖြစ်တဲ့ စာရေးတဲ့ နေရာကို ယူလာတာလဲလို့ ပြောလိမ့်မယ်။
အော် အခုပြောတာတွေက ခင်ဗျားကို ဥပမာ ပေးတာဖြစ်ပြီး ခင်ဗျား ဒီလို လုပ်နေတယ်လို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အမယ်လေး ခင်ဗျားကို ပြောရတာ လက်ဝင်လိုက်တာဗျာ။
နံပါတ် ၁ အချက်ကတော့ ကျုပ်သတိထားမိတာ ကြာပါပြီ။ ကျုပ်မိတ်တွေ တယောက်ကတော့ အဲဒီလို အုပ်စုဖွဲ့တာ မရှိဘူးဆိုပေမယ့် (ကွန်မန့်နဲ့ ပြောတာပါ) ကျနော်လုံးဝ မယုံပါဘူး။ ဒီကိစ္စက သေသေချာချာ ရှိနေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာက ခင်ဗျားလဲ တတ်နိုင်ရင် မန်းဂေဇက်ထဲက လူတွေကို မွေးနေ့ဖိတ်ကျွေးတာတို့ မန်းဂေဇက်ရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲကို စပွန်ဆာလုပ်ပြီး ဟော်တယ်မှာ လိုက်ကျွေးတာတို့ လုပ်ကြည့်ပါလား။ လူဆိုတာ အပိုင်းလေးကို ပိုင်မှဗျ။ အပိုင်းလေးဆိုတာ အပေးလိုင်းပေါ့ဗျာ။ ဒါလဲ ကျုပ်အကြံပေးတာနော်။
နံပါတ် ၂ အချက်ကတော့ ဒီနေရာရဲ့ အဓိကအသက်ပဲ။ အဲဒီတော့ ခုနစကားကိုပဲ ပြန်ကောက်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ ဘဝကို ထင်မြင်ချက်ပေးတာ မခံချင်ရင် ဒီလိုနေရာမျိုးကို အပြောခံရနိုင်တဲ့ အရေးအသားနဲ့ ယူမလာနဲ့ပေါ့။ အခု ပြောတာတွေဟာ သဘောတရားပဲ ဖြစ်ပြီး ခင်ဗျားကို ဦးတည်ပြောနေတာ မဟုတ်ပါ။
ခင်ဗျားပြောတဲ့ ဘပုဆိုတာ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ဘုလား။ ခင်ဗျားပြောမှပဲ နောက်တခါကျရင် ကျနော် သူ့ရဲ့ ပညာသားပါပါ ပြောတတ်ပုံကို သေသေချာချာ ကြည့်ရအုံးမယ်။ သူ့ကိုတော့ တချို့က ဒီကောင်လေး တော်လွန်းတယ်လို့ ပြောကြတာပဲ။ ကျုပ်ကလဲ မျက်စိလျှမ်းနေတယ်။
လောလောဆယ် အချိန်မရလို့ စာလေးတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ စရံသတ်ထားပါရစေ ….
ကျုပ်အမြင်လေးကို ပြင်ပလောကနဲ့ ထင်ဟပ်ကြည့်ရရင်
မြို့ထဲ ရွာထဲ မှာ နေထိုင်ပြောဆိုတဲ့အခါ လိုက်နာရတဲ့ စည်းကမ်းနဲ့
လူတစ်ဦးရဲ့ ၀င်းထဲ ခြံထဲ သတ်မှတ်ဧရိယာထဲမှာ နေထိုင်ပြောဆိုရတဲ့အခါ လိုက်နာရတဲ့စည်းကမ်းဆိုတာ
မြို့ထဲရွာထဲမှာက လူ့စည်းကမ်းကို လိုက်နာရပါတယ်
အိမ်ထဲ ခြံထဲမှာ ဆိုရင်တော့ လူ့စည်းကမ်းအပြင် အိမ်ရှင့်စည်းကမ်းကို လဲ လိုက်နာရပါတယ်။
မလိုက်နာရင်ကော … မရဘူးလား…
ရပါတယ်။ တချို့နေရာ အခြေအနေတွေမှာ မလိုက်နာလဲ ရပါတယ်။
လိုက်နာရတယ် ဆိုတာကိုက ရလို့/မရလို့ ဆိုတာထက်
အကျိုးရှိလို့/မရှိလို့ တနည်း အကျိုးရှိဘို့/မရှိဘို့ အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဦးပါလေရာက စာလေးတကြောင်း နှစ်ကြောင်းနဲ့ စမယ်ဆိုလို့ ကျနော်ကလဲ နည်းနည်းပဲ ပြန်ဖြေပါအုံးမယ်။ ကျနော့်ရဲ့ သဘောထားကို အပေါ်မှာ တော်တော့်ကို ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ အမှန်အတိုင်း ဆိုရသော် ကျနော်သဘောကျတဲ့ လူတွေထဲမှာ ပါပါတယ်။ စည်းကမ်းချက်ဟာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ လိုက်နာနိုင်တယ် မလိုက်နာနိုင်ဘူး မပြောသေးပါဘူး။ အခုဟာက အဲဒီအပေါ်မှာ ရပ်တဲ့ထောင့်တွေ မတူတော့ပါဘူး။ အပေါ်မှာ ဖြေခဲ့ပြီးသားဖြစ်လို့ ထပ်မဖြေတော့ပါဘူး။
ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ ဂေဇက်ကိုသဘောကျမိတာ ငြင်းခုန်ခြင်းအနုပညာကြောင့်ပါ။
ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုကတည်းက ဒီလူတစ်ယောက်ဟာ သူဆွေးနွေးတဲ့စာကို တလေးတစားနဲ့
ကိုယ့်စာကို အဲဒီလို စေသေသေချာချာဖတ်ပြီး ပြန်ဆွေးနွေးတဲ့စာတွေကိုကျွန်မအလွန်သဘောကျပါတယ်။
ကျွန်မ Ning ဆိုဒ်တော်တော်များများသုံးပါတယ်။
တစ်ချို့တွေက ပါစင်နယ်ခင်မင်မှုအရ အားပေးတယ်ဆိုတာသိစေချင်ရုံမန့်သွားကြပါတယ်။
အဲသည်လို စာကိုသေသေချာချာမဖတ်ပဲ အပေါ်ယံမန့်သွားတဲ့အပေါ် ကျွန်မတို့ဘယ်လိုမှ
အများအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ဆိုဒ်တွေမှာက ကွန့်မန့်တွေကြောင့်နည်းနည်းလေးပွဲဆူလာတာနဲ့
ဆိုဒ်မှာဆူညံ ဆူညံဖြစ်ရင် ဆိုဒ်ပျက်တော့မယောင်ပုံစံမျိုးနဲ့သတိပေးစာတွေထုတ်ကြပြန်တယ်။
ပို့စ်တင်တဲ့သူတွေဟာလည်း ဆိုဒ်ရဲ့ Top Ten Post မှာပါရဖို့ Blog Post တွေကိုပဲတင်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်မ၀င်နေတဲ့ဆိုဒ်တွေမှာ စာတွေကိုသေသေချာချာဖတ်ပြီး ဆွေးနွေးကြဖို့
ကျွန်မကတော့ ဖရုဿဝါစာ မပါပဲ လွတ်လပ်စွာ ၀င်ဆွေးနွေးခြင်းကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်ရှင်။
ဘာနဲ့မှလဲလို့မရနိုင်လောက်အောင် ပါဘဲ ။
တခါတခါ ကြွက်ချေးမှန်းမသိတဲ့ ကြွက်ချေးတွေ
ဆွမ်းဆန်ထဲပါ ပါလာတတ်တော့ ……..
စိတ်ဖေါက်ပြီး ထ ဆဲ တတ်ကြတဲ့သူတွေကို ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါစေ….။
ကိုနွေဦးကိုလဲ အလည်ရောက်လို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ။ မနန်းတော်ရာသူကို ပြောတဲ့ စကားကိုပဲ ထပ်ညွန်းပါရစေ။ ဆွေးနွေးတာကို ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ ကျုပ်က ကျုပ် personal life ကိုစာထဲ ထည့်မရေးလို့ ဘယ်သူမှ ဝေဖန်ဖို့ အခွင့်အရေးမရှိပါ။ ဝေဖန်ရင်လဲ အတော့်ကို အောက်တန်းကျသူသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်က ထည့်ရေးရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ အနေနဲ့ ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါ စာကို ဝေဖန်တာ ဖြစ်သွားပါပြီ။ ပါစင်နယ် တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်တော့ပါ။
မနန်းတော်ရာသူက ဆွေးနွေးတဲ့ အကြောင်း လာပြောနေပေမယ့် ကျနော့်ရဲ့ ဒီပို့စ်ချည်တိုင်က စည်းကမ်းချက် ၁၃ အကြောင်းဖြစ်လို့ အဲဒီအကြောင်းကို အပေါ်မှာ ကွန်မန့်တွေနဲ့ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။
အင်း တကယ်တော့ တော်တော်လေး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးသူတွေထဲမှာ ကျနော်လဲ ပါတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီအကြောင်းကို ကန့်ကွက်စရာ မရှိပါ။
သူရေးတဲ့ပို့စ်တွေကို သေချာဖတ်ကြည့်ရင် သူ့ရဲ့ စိတ်သဘောထားကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်
ဖြဲသီးပြောသလို တရုတ်ဖြစ်လိုက် မွန်ဖြစ်လိုက် ရခိုင်ဖြစ်လိုက် ကုလားဘက်ကရေးလိုက်နဲ့
ကြာတော့ ဘာလူမျိုးမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး သူ့တစ်ယောက်တည်းနဲ့ ကုလသမ္မဂ္ဂဖွဲ့လို့ရလောက်တယ်ဗျ
ကျန်တာတော့ ပြောတော့ပါဘူးနော် ပါးတွေယားလို့ အဟီးးးးးးး
ခင်ဗျားကတော့ ဦးပုညရေးတဲ့ မယ့်သားရွှေစင် မုန့်တီဟင်းလို ကွင်းကွင်းကြီး မြင်သောကြောင့် ဆိုတာလို ကွင်းကွင်းကြီး မြင်တဲ့လူပဲဗျာ။ ကျုပ်က ကျုပ်ရေးတာကို အဲဒီလို သဘောပေါက်ရင် သိပ်သဘောကျပါ့။ အမှန်ပဲဗျို့။ အသစ်ရေးတဲ့ လူတွေကို နှိပ်ကွပ်ချင်ရင် တို့ဘိုးဘွားတွေရဲ့ တရုတ်သွေးသားတွေက ပြောတာဆိုပြီး ဝင်ပြောလိုက်။ စတစ်ကီပို့စ်တွေနဲ့ ပျောက်သွားအောင် လုပ်လိုက်။ တခါ ချက်ချင်း ကျနော့် အဘွားမွန်မကြီးရဲ့ မွန်သွေးသားတွေက ပြောတာဆိုပြီး ဖြစ်လာလိုက်။ အဲဒီလိုနဲ့ ဗမာတွေကို ပြောလို့ သူပြောတာ တလွဲတွေဆိုပြီး ရှင်းနိုင်တဲ့ လူတွေ ရောက်လာလို့ အဆဲခံရရင် ချက်ချင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ့် ဗမာစကားပဲတတ်လို့ ဗမာလို့ပဲ ခံယူတယ်ဆိုပြီး ဖြစ်လိုက်နဲ့။ ပြောမပြောချင်တော့ပါဘူးဗျို့။
အမှန်တော့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ကိုယ့်ဆွေကိုယ့်မျိုးတွေလို့ သဘောထားနိုင်ရင်တော့ ကောင်းပါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်စိတ်ထင် general မျက်နှာဖုံးကြီးစွပ်ပြီး လိုက်နှိပ်ကွပ်နေတာလို့ မြင်တယ်။
ကျုပ်ကတော့ တော်တော်လေး စိတ်ထားတွေကို နားလည်နေပြီလို့ ထင်တယ်။
နည်းနည်းရေးမယ်ဗျာ၊ ပါးရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ လျှပ်တပျက်တော့မလုပ်နဲ့ ကိုစံလှကြီးရေ ဒါလေးတော့ ကြိုပြောမယ်။ ကာလိုက်ချိန်မရာမှာစိုးလို့ပါ။ ကျွန်တော်နားလည်သလောက်ရေးမှာပါ မှားတဲ့အခါလည်း မှာမပေါ့နော်။
Do & Don’t (Rules) ဆိုပြီး ညာဖက်မှာ ဒီဂဇက်ရဲ့ စည်းကမ်းလေးတင်ထားတယ်ဗျ၊ အတော်လေး စာရေး သူတွေအတွက်ကောင်းတယ် မျှတတယ်လို့ယူဆလက်ခံတယ်။ အဲဒီတော့ ဂဇက်မှာ ပိုစ့်တစ်ပုဒ်ဘဲရေးရေး၊ အခြားရေးလို့ရတာတွေရှိပါသေးတယ် ဂျာနယ်၊ သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း စသည်ဖြင့် နောက်ဆုံးဗျာ ရည်စားစာ မကျန်ပေါ့၊ ရေးတဲ့စာရေးသူ ဒီမှာဆိုပိုစ့်ရေးသူက မိမိရေးတဲ့စာပါ အကြောင်းကို တာဝန်ယူနိုင်ဖို့တော့လိုတယ် ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အဲဒါသူရေးတာလေ သူရေးတာကို၊ သူရေးတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်ကို သူတာဝန်ယူချင် စိတ်မရှိရင် အစတယ်ကမရေးနဲ့ပေါ့။ အဲဒီမှာ သူရေးတဲ့အကြောင်းအရာပေါ် သူတာဝန်ယူနိုင်လို့ကတော့ ကိုယ့်အကြောင်းဘဲရေးရေး၊ သိတာဘဲရေးရေး၊ တွေးမိတာဘဲရေးရေး အခြားဘာဘဲရေးရေး ရေးချင်တာရေးခွင့်ရှိပါတယ်။
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ မရေးနဲ့မပြောဘူး ဘာဘဲရေးရေး ရေးပါ။ မိမိရေးတဲ့အကြောင်းအရာကို မိမိတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်ဒါပါဘဲ။ ၊ ဒါပေမယ့် လွတ်လပ်စွာရေးဆိုလို့Do & Don’t (Rules) ကောလိုသေး လို့လား မေးစရာရှိတယ် လိုပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဂဇက်မှာရေးတာလေ၊ ဒီမှာဝင်ရေးရင် သူ့သတ်မှတ်စည်းကမ်းတော့ လိုက်နာပေါ့။ ဥပမာ- ဘုရားပေါ်တက်ရင် ဖိနပ်တွေ၊ ခြေအိတ်တွေ ချွတ်ခဲ့ပါတဲ့၊ ဘာလို့ချွတ်ရမှာလဲ ငါ့ကဒီဘာဝင်မှမဟုတ်တာ လာလေ့လာတာလေ ဆိုလို့မရပါဘုး၊ မင်းမချွတ်ချင်ရင် ရှင်းရှင်းလေးဘဲ မင်းမ၀င်နဲ့ပေါ့၊ အဲလိုပါဘဲ ဒါကလဲ ဆိုဒ်စည်းစနစ်ရှိဖို့ သတ်မှတ်ချက်၊ အဲဒီသတ်မှတ် အတိုင်းအကျုံးဝင်ရင်တော့ ကိုယ့်အကြောင်း သူအကြောင်း ဘာအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ရေး အဲဒီရေးတဲ့အပေါ် ဆင်ဆာမရှိဘူးနော် တန်းတင်လို့ရတယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရေးတာကို ကိုယ်တာဝန်ယူသင့်တယ်ဆိုတာပါ။
ပိုစ့်တစ်ခုရဲ့အောက်မှာ မန့်ကြတာလေးနဲ့ပက်သက်ပြီး ဒီလိုမြင်ပြန်တယ်။ မန့်ကြတဲ့နေရာမှာ ဝေဖန်တာ နဲ့ လေကန်တာ ကွဲစေချင်တယ်။ ဝေဖန်တယ်ဆိုတာက ပိုစ့်အကြောင်းအရာကို တိုင်တည်ပြီး ဆိုးတယ် ကောင်းတယ် ဖြစ်သင့် မဖြစ်သင့် ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင် ဆွေးနွေးတာ။ စာရေးတဲ့သူတစ်ယောက်က မိမိရေးတဲ့စာအပေါ်ကို အဲလိုဝေဖန်တာ လက်ခံသင့်တယ်၊ ဒါဟာနောက်ရေးမယ့် စာတွေအတွက် အတွေးကုန်ကြမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ လေကန်တယ်ဆိုတာကတော ပိုစ့်နဲ့ဆိုင်ချင်လည်းဆိုင်မယ် မန့်တဲ့အရာ ပေါ်မှာ ပြန်ပြီးမန့်တာမျိုးလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ၀င်ဆဲသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင် ဖတ်သွား တယ်လို့ အသိပေးတာလဲဖြစ်မယ် ဒါက လေကန်တဲ့သဘောလို့ ယူဆမိတယ်။အဲလိုလေကန် တာကို ပြန်မမန့်ချင်လည်းရတယ် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကလည်း အပျော်ခင် လို့ လေပြန်ကန်မျိုး ပြန်မန့် လည်းရတာပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ရှိသပေါ့ ပိုစ့်ရေးရင်တော့ ဝေဖန်မှု့ဆိုတာအမျိုးမျိုးလာနိုင်လို့ ခံနိုင်ရေ ရှိရမယ်၊ ခံနိုင်ရေမရှိရင် ပိုစ့်ရေးတာ ရပ်ချင်ရပ်ပေါ့။
နောက်တစ်ခုက ကွန်မန့်တွေနဲ့ ဝေဖန်ကြတာ ဖြစ်စေချင်တာတော့ ပိုစ့်ပါအကြောင်း၊ ကွန်မန့်ပါအကြောင်း အရာကို တိုင်တည်ထားပြီး ကိုယ့်အမြင် သူအမြင် မျိုးဆိုကောင်းသပေါ့ဗျာ။ ပိုစ့်ပါအကြောင်းကိုမဟုတ်ဘဲ အရေးမပါတဲ့ ပိုစ့်ရေးသူကို ဝေဖန်တာမျိုး၊လေကန်တာမျိူးကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
ဥပမာ – သမ္မတကြီးမိန်ခွန်းပါအကြောင်းအရာကို ကောင်းဆိုးဝေဖန်တာမျိုးက သဘာဝကျပေမယ့်၊ သမ္မတကြီးမိန့်ခွန်းပြောနေတုန်း စကားပြောခွက်က အသံထွက်ခလုတ်လေးခဏပိတ်ပြီး ပါးစပ်လက်လေကာလို့ ခေါင်းလေးစောင်းပြီး ချောင်းတစ်ချက် ဟန့်တာကို အများရှေ့မှာ ချောင်းဟန့်တာ တက်ရောက်သူတွေကို မလေးစားဘူး အကျင့်မကောင်း ဘူးလျောက်ပြောတာကတော့ တမင်သက်သက် အပုပ်ချတာမျိုးလေ ဒါကဝေဖန်တာလည်း မဟုတ်ဘူး၊ လေကန်တာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ ဘယ်လိုပြောရမလဲ ထိုးနက်ချင်စိတ် မနာလိုမရှု့စိတ် လိုဘဲပြောရမလားပေါ့ဗျာ။
လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ခြင်းကင်းရှင်ကြပါစေ၊ အထင်သေးခြင်း အချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။
ဦးခင်ခလို့ပဲ ရေးရေး ကိုခင်ခလို့ပဲ ရေးရေး ကျနော့်ထက် အသက်ကြီးနိုင်လို့ ရိုရိုသေသေ ပြောလိုက်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေကြီးရေ ပါးရိုက်မယ် ဆိုတာ တမင်ပေါ်လွင်အောင် ရေးတာပါ။ နောက်မှာ ဆက်ရေးထားပါသေးတယ်။ တကယ်တော့ ပြန်ဝေဖန်မှာပါလို့။
ဦးခင်ခ အနေနဲ့ ကျနော်ပြောချင်တဲ့ အချက်ကို မဖမ်းမိသေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ စည်းကမ်းချက်ကို ပြောတာမဟုတ်ပါ။ အပေါ်က အဖြေတွေမှာ သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်စေလိုပါတယ်။ကိုခင်ခက သမ္မတကြီး မိန့်ခွန်းပါ အကြောင်းအရာကို ဝေဖန်တာ လက်ခံနိုင်တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်နော်။ သမ္မတမိန့်ခွန်းကြီးနဲ့ ဥပမာ ပေးရတာ သိပ်တော့ မကောင်းပါဘူးဗျာ။ ဥပမာဗျာ သမ္မတကြီးက မိန့်ခွန်းထဲမှာ တိုင်းပြည်တိုးတတ်ရေးကို မပြောပဲနဲ့ ကျုပ်ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းမှာ စာဘယ်လို တော်ခဲ့တာပေါ့ ခင်ဗျားတို့ အတုယူဖို့ကောင်းတယ်။ ကျုပ်ဇနီးဆိုလဲ တကျောင်းလုံးမှာ အချောဆုံးဗျ။ ကျုပ်အမေနဲ့ အဖေက သိပ်ချမ်းသာတာ။ ကျုပ် ညီအကို မောင်နှမတွေလဲ တကယ့်ကို တော့်တဲ့လူတွေ။ ခင်ဗျားတို့နဲ့တော့ တခြားစီပဲလို့ မိန့်ခွန်းထဲ ထည့်ပြောရင် အဲဒီ သမ္မတ အဝေဖန် မခံရဘူးလို့ ထင်သလား။ ဝေဖန်ပြီး ရေးမယ့် သတင်းစာတွေက ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်တာလား။ သမ္မတက စပြီး သူ့ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို ကြွားလို့ အဝေဖန်ခံရတာလား။
ဦးခင်ခရေ တကယ်တော့ ကြွားလုံးတွေကို ဆောင်းပါးထဲ ထည့်ရေးမယ်ဆိုရင် ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူများက ဝေဖန်ရင်လဲ ပါစင်နယ်လို့ မအော်ပဲ ရှင်းနိုင်ရမယ်။ ဦးခင်ခ ကျနော့် ဆိုလိုချက်ကို ဒီမှာ သဘောမပေါက်သေးဘူး ဆိုရင် ထပ်ပြီး ပြောပေးပါ့မယ်။
ကိုစံလှကြည်ရေ မိန်ခွန်းထဲမှာ ကိုစံလှကြည်ပြောသလိုမိမိအကြောင်းကြွားပြောထားရင် ဝေဖန် ခွင့်ရှိတာပေါ့၊ အဲလိုပါဘဲ ပိုစ့်ထဲမှာ ဘာရေးလဲ ကွန်မန့်ထဲမှာ ဘာရေးလဲ ရေးတဲ့အကြောင်း ကို ဝေဖန်မှာဘဲလေ။ ကိုယ့်အကြောင်းရေးရင် အဲဒီအကြောင်းကိုဘဲ ဝေဖန်ကြမှာပေါ့။
ပြီးတော့ မိမိရေးခဲ့လို့ဝေဖန်ခံတာကိုလည်း ရေးတဲ့သူက နားလည်ရမယ်လေ၊ နားမလည်နိုင် မခံနိုင်ရင် နောက်မရေးဘဲနေလိုက်လည်းရတာဘဲလေ။ ကိုယ်ဘဲရေးခဲ့တာကိုး။ ဒါပေမယ့် သူကဘယ်သူဆိုတာ ပိုစ့်ထဲမရေးဘဲနဲ့တော့ ပါစင်နယ်တွေမဖြစ်စေချင်တာပါဗျာ။
ကိုစံလှကြည်ရေးတဲ့ ( တကယ်တော့ ကြွားလုံးတွေကို ဆောင်းပါးထဲ ထည့်ရေးမယ်ဆိုရင် ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူများက ဝေဖန်ရင်လဲ ပါစင်နယ်လို့ မအော်ပဲ ရှင်းနိုင်ရမယ်။ )
အပေါ်မှာကျွန်တော်မန့်ထားပါတယ်- ကိုယ်ဘာရေးလဲ ကိုယ်ရေးတာ ကိုယ်တာဝန်ယူရ မယ်လို့လေ အခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်လေ ( မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ မရေးနဲ့မပြောဘူး ဘာဘဲရေးရေး ရေးပါ။ မိမိရေးတဲ့အကြောင်းအရာကို မိမိတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်ဒါပါဘဲ။ )
ကိုယ်ရေးတဲ့စာကို တာဝန်ယူဖို့ဆိုတာ ကျနော်မိုးပြာဆရာတွေ ကိုတောင် သူတို့ပို့စ်တွေထဲမှာ ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောခဲ့ပြီးသားပါ။ ကျနော့်ကို ဒီသဘောထားကို သဘောတူ မတူပြောစရာ မလိုသလို ရှင်းပြစရာ မလိုတဲ့သဘောထား ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်က အရင်စပြောတာတောင် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခုကတော့ တာဝန်ယူမှုအပိုင်းကို တိုက်ရိုက်ပြောလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။ ပြောချင်တာက စည်းကမ်းချက် ၁၃ ပါ။ အခု ဦးခင်ခရဲ့ ပြောစကားအရလည်း ကျနော့်အမြင်ကို ထောက်ခံဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။ ကျနော် ရေးခဲ့ဖူးသလို ကိုယ်ရဲ့ personal life ကို ကိုယ်မရေးပဲနဲ့တော့ သူများသိဖို့ ခက်ပါတယ်။ ရေးလို့သာလျှင် အဝေဖန်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။(ဒါကလည်း တော်တော်လေးကြွားတဲ့ အရေးအသားမျိုးမှပါ။)
စာထဲမှာ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် မရေးရဘူးလို့ ကျနော် လုံးဝမပြောဘူးဆိုတာ ထပ်ပြီး highlight လုပ်ပါတယ်။ ကျနော် ပြောခဲ့ပါတယ် နိုင်ငံကျော် ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တွေတောင် ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ရေးတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထားနဲ့ အရေးအသား လိုပါတယ်။ ဥပမာ ဦးခင်ခဟာ ငွေတိုးချေးစားသူ ဆိုပါတော့။ အဲဒါဟာ ဦးခင်ခရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်ပြီး ကျနော်အနေနဲ့ ဝေဖန်လို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို ဦးခင်ခက စာမျက်နှာပေါ်တင်ပြီး “အများတကာ ခိုကိုးတွယ်ရပါတဲ့ ကိုခင်ခပါကွယ့်။ အားလုံး ကျုပ်ကျေးဇူးမကင်းပါဘူး” ဆိုပြီး ရေးလိုက်တာနဲ့ ကျနော်က အရေးအသားကိုရော အဲဒီလုပ်ငန်းကိုရော ဝေဖန်ခွင့် ရှိသွားပါပြီ။ အဲဒါ ကိုခင်ခရဲ့ ပါစင်နယ် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကျနော်ကလဲ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စည်းပေါ်က ရပ်ပြီး ဝေဖန်တာ ဖြစ်သွားပါပြီ။ အဲဒီတော့ အဲဒီလိုကေ့စ်မျိုးမှာ စည်းကမ်းချက် ၁၃ ဆိုပြီး အနီနဲ့ရေးရေး အစိမ်းနဲ့ရေးရေး မထူးတော့ပါဘူး။
တဘက်လူက ကျုပ်က စည်းကမ်းချက်နဲ့ မငြိဘူး။ ခင်ဗျားရဲ့ အရေးအသားကို ဝေဖန်တယ် ဆိုတာနဲ့ သေပြီဆရာပဲဗျို့။
ဦးခင်ခရဲ့ ပထမကွန်မန့်က သမ္မတမိန့်ခွန်း ဥပမာက ကျနော့်ဆိုလိုချက်နဲ့ လွဲနိုင်တယ်လို့ ယူဆလို့ ကျနော့်ရဲ့ မူလချည်တိုင်ကို ပြန်ဆွဲခေါ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုစံလှကြီး ပို့ စ်ဝင်ဝင်ချင်း
ဘေးက စည်းကမ်းချက် တွေကို သွားကြည့်တော့
““ – Member တဦးသည် အခြားMemberအပေါ် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ.. မှတ်ချက်/ထင်မြင်ချက် ပေးရန် လုံးဝ(လုံးဝ)အခွင့်မရှိ…. ”” လို့တွေ့ ပေမယ့် ၊ နံပါတ် ၁၃ လို့ပေးမထားတာကို တွေ့ ရတယ်ဗျ
ထားပါ .. နံပါတ်တပ်မထားသော်လဲ နံပါတ် ၁၃ ပဲပေါ့
ကိုစံလှကြီးအရေးအသားနဲ့သဘောထားကို ဖတ်ရတာ အားရှိတယ်ဗျာ
ဒီရွာကတော့ နေရတာပျော်တယ် ၊ တစ်ခါတစ်ရံ လဲ ပွဲတွေ ထဆူကြတယ်
ကျုပ်ကတော့ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်အယူနဲ့ ဆန့် ကျင်တာမျိုးတွေ့ မှ ပဲ ဆန့် ကျင့်လေ့ရှိခဲ့တယ်ဗျ
ဒါပေမယ့် ဆန့် ကျင်ရင်တော့ ဒဲ့ပါပဲ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုစံလှကြီး ရဲ့ သည်ပို့ စ်ကို သဘောကျ ကြိုက်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း
ကိုရှုံးနိမ့်မှုများနဲ့လူ ခေါ် ကိုစိုင်းကွမ်းခေးက စည်းကမ်းချက် ၁၃ လို့ပြောတာရယ် နောက်ပြီး နံပါတ် တပ်မထားပေမယ့် ၁၂ ပြီးဆက်လာလို့ ၁၃လို့ပဲ ရေးလိုက်တာပါ။ ကျနော့် သဘောထားကို အပေါ်က ကွန်မန့်တွေမှာလဲ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။
ကိုပေရေ ကျနော် အခု အတိုက်အခံပါတီ ထောင်မလား စဉ်းစားထားတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုပေဆီက တမဲများ ရမလားလို့ပေါ့။ တော်ကြာ ထောက်ခံပါတယ် ပြောပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကျတော့ မဲကို ထည့်ချင်ရာထည့်မယ် ဆိုတာလဲ ဖြစ်နေအုံးမယ်။ အလကား နောက်တာပါဗျာ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ လက်မတစ်ချောင်းထောင်ပါကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်…
လုံမကတော့ အဲ့ဒီစည်းကမ်းချက်တွေကိုကြည့်ပြီး စဉ်းစားမိတာ တစ်ခုရှိပါတယ်…
စည်းကမ်းချက်တွေမှာ နံပါတ်တွေထိုးထားတယ်… 1 ကနေ9အထိ..စည်းကမ်းချက်တစ်ခုကို နံပါတ်တစ်ခု အနေနဲ့ပေါ့..
အဲ..10 ကစပြီး အောက်မှာ – လေးတွေကို ခွဲရေးထားတယ်.. အဲဒီမှာ ဘယ်လိုမြင်လိုက်လဲဆိုရင် အောက်က – နဲ့ရေးထားတဲ့အချက်တွေက အပေါ်က နံပါတ်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ပတ်သက်မယ်ပေါ့… သီးခြားစီဆိုရင် သီးခြားနံပါတ်တပ်မှာပဲလေ…
ဆိုတော့ နံပါတ်ဘေးကအကြောင်းအရာနဲ့ – ဘေးက အကြောင်းအရာနဲ့ ဘယ်လိုပတ်သက်လဲဆိုတာတော့ စဉ်းစားဆဲပေါ့နော်…
ဒါက နံပါတ် (13) ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုံမအမြင်ကို ၀င်ပြောကြည့်တာပါ…
ပို့စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့ ဦးစံလှကြီးပြောထားတဲ့ စာထဲကလေသံကို ဝေဖန်တာ ပါစင်နယ်တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ်…
လူတစ်ယောက်က ကျွန်တော်ဆရာဝန်ပါ လို့ ထည့်ရေးထားရုံနဲ့ ဆရာဝန်မဟုတ်တဲ့သူတစ်ယောက်က ကွန်မန့်မှာ ခင်ဗျားတို့လို ဆရာဝန်ဆိုတာ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်လို့ ၀င်ပြောရင်တော့ ပါစင်နယ်တိုက်ခိုက်တာလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်…
ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ ပို့စ်ပိုင်ရှင်က ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေကသာ လူ့အသက်တွေကိုကယ်တာဖြစ်လို့ ဒီအလုပ်ကသာ အမွန်မြတ်ဆုံးပါ ဘာညာဆိုပြီး လာပြောတဲ့အပေါ်မှာ အခြားသူတွေက ပြန်လည်ချေပမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ပါစင်နယ်တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်…
(ခေါင်းထဲပေါ်တာရေးတာဖြစ်ပြီး ရွာထဲက ဆရာဝန်တွေကို ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါကြောင်း.. )
ကျနော် ပြောချင်တာနဲ့ တထပ်တည်းကျလို့ ပို့စ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ အခွင့်အရေးအရ စိတ်ပါလက်ပါ BC ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော့်ကို ထောက်ခံလို့ မဟုတ်ပါ။ နောက်တချက်က ကျနော့်ကို ကန့်ကွက်ချင်သူတွေ အစိမ်းရနေပြီး ထောက်ခံပါတယ်လို့ ပြောသူက ဘာမှမရဘူးဆိုတော့လည်း မတရားဘူးပေါ့။ ဒါက ပို့စ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ တရားတဲ့ အခွင့်အရေးပါကွယ်။
နံပါတ် ၁၃ အနေနဲ့တော့ ကိုပေကို ပြောပြီးပါပြီ။ အဲဒီထဲက အတိုင်းပါပဲ။ နံပါတ်ထက် သဘောတရားကို ပြောချင်တာပါ။
အောက်က အချက်ကတော့ လုံမလေးမွန်မွန်နဲ့ ကျနော် တထပ်တည်း ကျပါတယ်။ ဥပမာဗျာ ကျုပ်က ပြောမယ်။ ကျနော်ဟာ ဆရာဝန်တယောက်ပါ။ ဆေးပညာနဲ့ အသက်မွေးပါတယ်။ အိုကေပေါ့။ အဲဒီလိုလေး ပြောတဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ဝေဖန်ရင်လဲ အတော်ဆိုးသူပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်အမြင်အရ အဲဒီလို ဘယ်သူမှ မဝေဖန်ကြပါဘူး။
ဒါမှမဟုတ်ပဲ ဆောင်းဦးလှိုင် သီချင်းလေးနဲ့ “တလောကလုံး အသားကုန် လေးစားရတဲ့ ဆရာဝန်ကြီး ဘယ်သူမှမမီ ကျနော့်ကို မမီကြဘူးတဲ့” ဟာ အဲဒီမှာ လွဲသွားတာပဲ။ စကတည်းက ယာဉ်သကို ဆိုသလို ကျုပ်က အားလုံးကို စပြီး ကြွားလိုက်ပြီ။ အဲဒီတော့ သူများက ဘဝင်မြင့် ဆရာဝန်ကြီးဆိုရင်လဲ မရှင်းနိုင်ရင် ခံပေတော့ပေါ့။ အဲဒီတော့ အဲဒီသဘောတရားကို ပြောချင်တာပါ။
မန်းဂေဇက်က ဘယ်ဒေါက်တာကိုမှ ပြောတာမဟုတ်ပါ။ ဥပမာ ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
အစအဆုံး ဖတ်ပြီး ငြင်းစရာက မရှိဖြစ်နေတယ်။
ရွာထဲမှာ .. ကျွန်တော် အရေးပါးသလို အဖတ်ပါးတယ်။ ဖတ်တော့လည်း ကွန်မန့် သိပ်မပေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။
ဆိုတော့ကား …. ရွာသားတွေနဲ့ ခပ်စိမ်းစိမ်းဖြစ်နေတယ်။
ရွာထဲ ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ခရေစေ့တွင်းကျ မပြောနဲ့ သူကြီး အပြောင်းအလဲ ရှိတာမျိုးတောင် မသိလှပါဘူး။
ဒါပေမယ့် .. ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ကြည့်မိတော့ .. စိတ်ဝင်စားသွားတယ်…
ဒါက social site တွေ စာပေsite တွေမှာ ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုပဲ။
စိတ်ဝင်စားတယ်။ စိတ်ဝင်စားတာက လွဲရင် ခုထိတော့ ဘာမှ သိပ်မပြောချင်သေးဗျ။
ကိုရင်နင့်အောင် အနေနဲ့ ငြင်းစရာ မရှိဘူးဆိုလဲ အလည်လာရောက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးဥပကာရ တင်ရှိပါကြောင်း။
သူကြီးတော့ အပြောင်းအလဲ မရှိသေးပါကြောင်း။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်စိတ်ထင် ဒီသူကြီးက လာဘ်စားပြီး under table ကိစ္စတွေ သိပ်များတယ် ထင်ပါကြောင်း။ ဒါကြောင့် အတိုက်အခံဘက်က အယုံအကြည်မရှိ အဆိုတင်သွင်းပြီး မဲခွဲဖြုတ်ချနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါကြောင်း။ အခုလည်း အာဏာရှင် တယောက်လို ပြုမူနေတယ်ဗျ။ ဟီး ဟီး အလကား နောက်တာပါဗျာ။
ရွာ့ ဝင်ကြေးမပေးနိုင်သေးလို့ 
ဆဲ ခံရမှာကြောက်လို့ 
မီးသင်္ဂြိုစက်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ 
ကျုပ်ကို အရူးလို့ ပြောလည်း
အေးဆေးပဲ ကိုယ့် ဆရာ
ကျုပ်အသက်နဲ့  ကြုံရတဲ့ ဘဝ
ကျုပ်လည်း ဘောစိဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ 
ခုတော့ခင်ဗျားတို့ ကိုအလည်ခေါ်ချင်ပါရဲ့ 
ဂုဏ်တွေ ပညာတွေ သဘာတွေ
ကဲ ….ဒီလိုပြောတော့ 
ဘယ်သူ့အလှည့် အရင်လဲပြော………!
ကဗျာကို ဖတ်လိုက်တာနဲ့ ကျနော်ပြောချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သွယ်ဝိုက်ပြီး ပြောတယ်လို့ ယူဆလို့ အထူးမရှင်းတော့ပါ။ အပေါ်က ကျနော့် ကွန်မန့်တွေကို အားပေးသွားပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းလိုလို လာရောက်လေ့ ရှိတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ.. မှတ်ချက်/ထင်မြင်ချက် ပေးရန် လုံးဝ(လုံးဝ)အခွင့်မရှိ….
ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကြောင်းသိမဟုတ်ရင် ရန်ပွဲဖြစ် ပူညံပူညံဖြစ်တာမျိုးတွေ မဖြစ်အောင် ကြိုတင် ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ သူကြီးက ထည့်ထားတယ်ထင်ပါတယ်..
ရောမရောက်ရင် ရောမလိုကျင့်ရမယ်လို့ ဆိုထားတော့ ဒီဆိုဒ်ကိုဝင်တဲ့အခါ ကျနော့အနေနဲ့ကတော့ ဒီစည်းကမ်းလိုက်နာလိုက်တာပါပဲ
တကယ်တမ်းပြောရရင် ကိုယ်ကတော့ မှန်တယ်ယူဆတာကို ပြောတယ်ရေးတယ်ဆိုပေမယ့် လူတိုင်းနဲ့တော့ ဘယ်ထပ်တူကျနိုင်မလဲနော .. ကိုယ့်ကို တခြားလူတွေ ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတာ ကျနော်ကတော့သိချင်တယ် ကောင်းတယ်ဆိုရင်သာ ဖွင့်ပြောကြပေမယ့် မျက်နှာနာစရာဆို အတော်အတန် ရင်းနှီးတဲ့သူတွေမှ ဝေဖန်ပေးတတ်ကြတာပါ.. လူသားချင်း စာနာထောက်ထားကြရာဝယ်ဆိုတဲ့ပို့စ်အပြီး ကြောင်ဝတုတ်နဲ့ ရွှေတိုက်တို့ ပြောကြဆိုကြသလိုပေါ့..
ကျနော်တို့ စိတ်ပူကုန်လို့တောင် ဦးဘလက် ဓာတ်ပုံနဲ့တကွ သူတို့ အဆင်ပြေကြောင်း ပို့စ်တင်ပေးသေးတယ်..
ကျနော် သူတို့ကြားက ခင်မင်မှုမျိုးကို အားကျတယ်.. ကိုယ့်ကို ကောင်းတယ်ဟေ့လို့ အားပေးမယ့်လူတွေသာမက အဲလို ထောက်ပြဝေဖန် ခံညင်းပေးတဲ့ သူတွေလည်း ရချင်တယ်ဗျာ
ခံငြင်းပေးတဲ့သူလို့ ပြောတာပါနော.. သတ်ပုံမှားသွားလို့
ကျနော့် အနေနဲ့ ဒီစည်းကမ်းကို လိုက်နာဖို့ မလိုက်နာဖို့ ကိစ္စကို တခုမှ မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ပြောချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဒီစည်းကမ်းချက်က ကျနော် အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့ ဥပမာတွေလို ပို့စ်တွေ ကေ့စ်တွေဆိုရင် အသုံးမဝင်တော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘယ်လိုမှ နားပိတ်ပြီး ဒါဒီဆိုက်ရဲ့ စည်းကမ်းလို့ပြောပြော တဘက်လူက ဒါပါစင်နယ် မဟုတ်ဘူး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ သေပြီဆရာပဲ။
ဘယ်လိုပဲပြောပြော စည်းကမ်းကို ကိုင်ပြောတဲ့လူ ရှုံးနိမ့်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုရွာစားကျော် ပြောတဲ့ပို့စ်တော့ ကျနော်တကယ်ကို ဝေဝါးဝါး ဖြစ်နေပါတယ်။ မြင်တော့ မြင်မိတယ် ထင်ပါရဲ့။ သေသေချာချာတော့ မဖတ်မိဘူးထင်တယ်။ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးတဲ့လူ ကြည့်ရတာတော့ သူလည်း စတစ်ကီပို့စ်နဲ့ တူပါတယ်။အမှန်အတိုင်း ပြောမယ်။ ကျနော်က စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် (၁၈) တိုင်းရင်းသားအရေးသို့ ပြန်ကြားချက်ကို ရေးပြီးကတည်းက စတစ်ကီပို့စ်တွေကို အလိုလို ကျော်သွားတတ်တယ်။ သူကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းနဲ့ ကောင်းမယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်သွားတာကိုး ဟဲ ဟဲ။ သိပ်ကြာနေပြီး သိတဲ့လူ ဆိုရင်တော့ ခပ်မြန်မြန် ကြည့်လိုက်တယ်။ ကျုပ်အကြောင်း အတင်းပြောရင် ဝင်ပြီး အားပေးမလို့ပါ။
လူသားချင်း စာနာထောက်ထားကြရာဝယ် ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အရကို တကယ်တော့ လူတွေမှာ ညှာတာစိတ် အနည်းနဲ့အများ ရှိတတ်ပါတယ်။ သိပ်ဆိုးတဲ့လူ အချို့က ချွင်းချက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က သူများကို စာနာထောက်ထားမှ သူများကလည်း စာနာထောက်ထားမှာပါ။ အပြန်အလှန်ပေါ့ဗျာ။
တခုတော့ရှိတယ်ဗျ ကိုစံလှကြီး… အပြန်အလှန် ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာ ကဦးအနေနဲ့ တဦးချင်းစီရဲ့ ရပ်တည်မှု အခြေခံ ပလက်ဖောင်း ကွဲပြားချက်တွေကို အရှိတရားလို့ လက်ခံပေးရမယ်။ ဒေါသကြီးသူ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြောတာ၊ လောဘကြီးသူ ကိုယ့်ဖက်ကိုယ်ဆွဲ ပြောတတ်တွေကို ဗွေမယူသင့်ဘူး…။ ဒီလိုပဲ လက်ဝဲသမားတွေ ကွန်မြူနတီဖက်ကနေတာ၊ လက်ယာသမားတွေ ဓနရှင်အမြင်ရှိတာ၊ လစ်ဘရယ်တွေ စိတ်ထင်တာလုပ်တာ နားလည်ပေးရမယ်။ ဘာသာရေးသမားက နာမ်လောကရှုဒေါင့်ကနေ ပြောမှာပဲ၊ စီးပွားရေးသမားက အမြတ်အစွန်းအတွက် အသီးသီး ကိုယ်သန်ရာသန်ရာ လုပ်တာ မှားတယ် မဆိုနိုင်ဘူး။ အတိုင်းအတာ တခုလွန်ပြီး ဒါမှဒါ တယူသန် ဖြစ်နေရင်တော့ လက်မခံသင့်ဘူးပေါ့။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာ အဲသလို နားလည်မှုအမြင် အားနည်းခဲ့လို့ ကိုယ်နဲ့မတူတိုင်း တံဆိပ်အမျိုးမျိုး ခပ်နှိပ်ပြီး အစွန်းရောက်ရင်း တိုင်းပြည်ပျက်ခဲ့ ရတယ်လေ။ အချိန်အခါနဲ့လည်း ဆိုင်သေးသဗျ၊ ဒီမို အတိုက်အခံများ ရေရေလည်လည် အနှိပ်ခံနေရစဉ် စစ်တပ်ဖက်လိုက်သူမှန်သမျှ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သောရှိ ဒီလိုပဲ ဆော်ရတာပဲ၊ ကိုယ်ဖက်က တတ်နိုင်တာ ပြန်လုပ်တာလေ၊ မတရားဘူး ပြောလို့တော့မရဘူး။ သို့သော် အခြေအနေတိုင်းအတွက် မသင့်တော်ဘူး။ ကိုစံလှကြီးလည်း သိပြီးသားပါ၊ လူတိုင်းကို တသဘောထဲ တွက်မရဘူးဆိုတာ။ ဒီတော့ ဝေဖန်ချက်တိုင်းကို ဘယ်ရှုဒေါင့် အခြေခံသလဲ မြင်ကြည့်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပဲ။ ဝေဖန်သူကလည်း အဲဒီလိုပဲ စာရေးသူ ဘယ်လိုအယူ ရှိသလဲဆိုတာ လေ့လာပြီးမှ ပြောသင့်တယ်။ မရင်းနှီးရင် ယေဘူယျသဘော ဒါမှမဟုတ် စကားပလ္လင်ခံ ဝေဖန်ပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သဂျီးနဲ့ကျုပ် ဆွေမျိုးရင်းချာ ဖြစ်လာတော့မှာ…။ :harr:
အဲဒီ ဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စကတော့ အပေါ်မှာ ကျနော့်ရဲ့ သဘောထားကို အတော်ပြောပြီး ဖြစ်လို့ ထပ်မပြောတော့ပါ။ ကိုကြောင်ကြီး သူကြီးနဲ့ ဆွေမျိုးရင်းချာ ဖြစ်လာတော့မယ့် ကိစ္စကတော့ စိတ်ဝင်စားပါ့ဗျာ။ အဲဒီကိစ္စက ကိုကြောင်ကြီး ပြောသလို အမြင်မတူတာတွေ ကိုဆွေးနွေးရာက စကားပလ္လင်ခံပြီး ပြောရာက ဖြစ်တာဟုတ်လို့လား။ ဟိုတလောက ကိုကြောင်ကြီးပြောတော့ အပွင့်တတ်ဖို့ ဘဝတောင် ရင်းခဲ့ရပါပြီဆို။ ကြည့်လုပ်ဦးနော်။ ကျုပ်ခုတလော ကြားတာက သူကြီးက လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတွေ under table တွေသိပ်လုပ်တယ်ဆိုပဲ။ ရွာသားကြီး ရွာသူကြီး အမည်ပေါက်အတွက် ဘယ်လောက် စတစ်ကီပို့စ်တခုအတွက် ကတော့ ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှ လုပ်နေတယ်လို့ ကြားတယ်။ ကောလာဟာလလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။ မြင့်တဲ့အပင် လေတိုက်ခံရတယ် ဆိုသလိုပေါ့ဗျာ။
တော်ကြာ မပြောကောင်း မဆိုကောင်း အဲဒီအတိုင်း ဖြစ်နေရင် ရွှေကိုယူသည် ငွေကိုယူသည် ပြီးတော့ လူကိုပါယူသည် ဆိုသလို ကိုကြောင်ကြီး ဖြစ်နေအုံးမယ်။ တော်ကြာ “စွန့်ခဲ့ရ ကိုကြောင့်ဘဝပါခင်ဗျာ” ဆိုပြီး ဝတ္ထုတိုတပုဒ် ဖြစ်နေအုံးမယ်။
ကွန်မန့်လေးတွေဘယ်ဂလိုများတက်လာမလဲလို့ငြိမ်ပြီးစောင့်နေတာခင်ဗျ။ခင်ဗျားပို(စ့်)ကို အစအဆုံးဝင်ကြည့်တိတ်တိတ်လေး ရယ်ရင်းပြန်ထွက်သွားတာပါ။အခုတော့ကော်မန့်တွေကများလာပြီ။
အနော်ဝင်ပါတော့မယ်။သိပ်လဲမပြောရဲဘူး ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်ကို သဂျီးကမကြိုက်ဘူးခင်ဗျ။ကျုပ်ဆိုလိုသော
အဲဒီချမ်းသာအောင်လုပ်နည်း(ပိုစ့်)မှာ ကျုပ်ခံစားချက်နဲ့တူညီတာတွေပါနေလို့ ဝင်ပြောလိုက်မိတာပါ။နောက်ပိုင်းတော့ ခေါင်းစဉ်ပြောင်းသွားတယ်ခင်ဗျ။သဂျီးကစလိုက်တာ ဟိုလူဂျီးကလဲသူ့အမြင်(သိပ်ပညာတတ်နေသကိုး)စွတ်တင်တာတွေကိုလဲဖတ်ရပါတယ်။personal life ပါ၊မပါအရင်မေးရမှာကဒီက အကြီးဆုံးလူဂျီးဗျ။သူကမေးခဲ့ပါတယ် (ကိုရင့်ရဲ့  personal file လေး မှတ်ပုံတင်တောင်ပါသေးသဗျ)ကျုပ်ကိုလဲတာဝန်ယူတယ်ဆိုကပဲ။ကျုပ်က ပြန်မေးတော့တိတ်သွားတာ
တစ်နိုင်ငံလုံးအခုဒီဆိုဒ်မှာအမြဲသုံးသူတိုင်းသိတယ်။ခင်ဗျားစည်းကမ်းချက်(၁၃)နဲ့ရေးသူကိုကြည့်လိုက်ကတဲကခင်ဗျားပြောတဲ့ စတစ်ကီရတော့မှာမဟုတ်တာကြိုတောင်သိသေး။အဲ အာမတော့မခံရဲဘူးဗျ အနီက အစိမ်းပုတ်ရောင်ပြောင်း၊မဖျက်ဘူးသိသာအောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ပြောတုန်းကလဲ deleted by admin
ဆိုပြီး———–အဲဒါပဲတွေ့ရတယ်ခင်ဗျ။သို့သော် deleted by admin ဆိုပြီးကွန်မန့်တွေတက်တဲ့(ပိုစ့်)တွေ
ကျုပ်ပြောတဲ့ “ကျုပ်မိတ်ဆွေတယောက်က ဒီရွာထဲမှာ အုပ်စုဖွဲ့ပြီး သောင်းကျန်းနေတာ မရှိဘူးလို့ ကျုပ်ကိုပြောသွားတယ်” ဆိုတာ ကိုမိုးတိမ်မဟုတ်ပါဘူးဗျ။ အခြားတယောက်ပါ။ ပြောတာလဲ ကြာလှပါပြီ။ ကျုပ်ကို သူကြီး မကြိုက်တာတော့ သူ့စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေကို မကြာခဏ ဆိုသလို ဆန့်ကျင်ဘက်ထောင့်ကနေ မြင်ပြတတ်တာကိုး။ ကိုယ့်လူကို မကြိုက်ဘူး ဆိုတာတော့ သဂျီး အလွတ်ကျက်ထားတယ် ဆိုတဲ့ ကျမ်းတော်မြတ်ကို ဝေဖန်လို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျုပ်အထင်ကို ပြောတာပါ။
အမှန်တော့ ဒီပို့စ်က လူတယောက်ကိုထက် အဲဒီစည်းကမ်းချက်ရဲ့ ဟာကွက်တွေကို ပြချင်တာပဲ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဲဒါတွေနဲ့ ငြိနေတဲ့ လူရှိတာတော့လည်း မတတ်နိုင်ပေဘူးပေါ့ဗျာ။
နောက်ဆုံးမှ ရောက်လာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင် စကားလည်း ပြောရင်းနဲ့ ဆောင်းပါးလေးကိုလည်း အကျဉ်းချုပ်ပါမယ်။ ဆိုလိုရင်းကိုပေါ့လေ။ အပေါ်က မိတ်ဆွေများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ အားနာကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဒီပို့စ်မှာ မိတ်ဆွေတို့ ဝေဖန်ချင်ရင် ကျုပ်ကို ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သိပြီး ဖြစ်တဲ့အတိုင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း စကားလုံးတလုံး သုံးလိုက်လို့ပါ။ အဲဒီတော့ ဝေဖန်ပါ။ လုံးဝကို စိတ်မဆိုးပါဘူး။ ကျုပ်က အလွန်ကိုရိုင်းတဲ့ စကားလုံး ပြောတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ တခြားအကြောင်းတော့ ပြောလို့ မရလောက်ပါဘူး။
ကိုကြီးပေါက်ရေ တခါတလေ ဘောလုံးပွဲမှာ ဂိုးဝင်ပေမယ့် ဒိုင်က လူကျွံဘောတို့(အမှန်က လူမကျွံ) ဖောင်းဘောတို့(အမှန်က ဖောင်းဘောမဟုတ်) တို့ဆုံးဖြတ်ပြီး ဂိုးမပေးတာ ရှိတတ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးသားသား မမြင်တာ ဖြစ်နိုင်သလို ခေါက်ဆွဲစားထားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျုပ်က ဒိုင်လူကြီး ခေါက်ဆွဲစားတယ်လို့ သံသယ ရှိပါတယ်။ တခါတလေလဲ အိမ်ရှင်အသင်းက အားနာလောက်အောင် ကျွေးမွေးပြုစု လက်ဆောင်တွေပေးလို့ ပင်းပြီး ဆုံးဖြတ်လို့ ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်တာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ စကားမစပ် သူကြီးလဲ ခေါက်ဆွဲကြော် အရမ်းကြိုက်တယ်ဆိုပဲ။
ဆောင်းပါးကို မိတ်ဆွေများကို အကျဉ်းချုပ်ရရင်
၁။ ဒီပို့စ်ဟာ သူများဆောင်းပါးကို ဝေဖန်ချက် တွေပေးလို့ မရဘူး ငြင်းလို့မရဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါ။ ဆောင်းပါးမှာ ထင်ရှားပေမယ့် ထပ်ပြီး highlight လုပ်ပါတယ်။ နို့မိုဆို ငြင်းခုံခြင်း အနုပညာကို လုပ်ခွင့်ရှိတယ် ဆိုတဲ့ဘက်ကို ရောက်အောင် ဆွဲယူသွားနိုင်ပါတယ်။ ငြင်းခုံခြင်း အနုပညာကို လုပ်တတ်သူထဲမှာ ကျနော်လဲ ထိပ်တန်းက ပါလေ့ရှိတယ် ထင်ပါတယ်။
၂။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ရေးခွင့်မရှိဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါ။ ဒါလဲ ပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ် ၁ အနေနဲ့ ဆိုလိုတာက ကျနော်ဖြစ်စေ အခြားသူဖြစ်စေ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကို စာထဲမရေးရင် ဝေဖန်ခွင့် မရှိပါဘူး။ ဥပမာ “ကိုရင်က တောင်ပုလုမြို့မှာ နေပေမယ့် US ကိုပညာတော်သင် လာလို့မရဘူး မထင်နဲ့” ဆိုတာမျိုးပါ။ အမှန်က ဘယ်သူမှလည်း တောင်ပုလုမြို့မှာ နေတယ်လို့ မပြောသေး။ သူ့ဘာသာသူ ဘယ်က စုံစမ်းလာမှန်းမသိပဲ သူများရဲ့ ကိစ္စကို ပြောတတ်ပုံမျိုးပါ။
အဲဒီလို ရှာရှာဖွေဖွေ စုံစမ်းပြီး ပြောရင်တော့ အလွန်ကို အောက်တန်းကျသူပါ။
တကယ်လို့ ကျနော်က ကျနော့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကို စာထဲထည့်ရေးရင်တော့ မေးလို့လည်း ရတယ်။ ဝေဖန်လို့လည်း ရတယ်။ ငြင်းခုံလို့လည်း ရပါတယ်။ စာပေဝေဖန်ရေး အနေနဲ့ တိုက်ခိုက်ချင်ရင်လည်း ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ စည်းကမ်းချက် ၁၃ ကအသုံးမဝင်တော့ဘူး ထင်ပါတယ်။ စာပေါ်တင်လိုက်ကတည်းက ပါစင်နယ် မဟုတ်တော့ပါဘူး။
နံပါတ် ၂ အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ရေးခွင့် ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်လေနဲ့ ရေးလို့ ရသလို ကြွားကြွားလေးလည်း ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူများက ဝေဖန်ရင်တော့ စည်းကမ်းချက် ၁၃ ကိုကိုင်ပြီး ပါစင်နယ်လို့ ပြောလို့မရတော့ပါဘူး။ ရှင်းနိုင်ရပါမယ်။
နောက်ဆုံးကတော့ မ pooch ရေးတဲ့ “ဒီလူဘာကြောင့်ထွက်” ဆိုတဲ့ပို့စ်ထဲက ကိစ္စလို နေရာကြီးကြီးကို တာဝန်ယူထားသူတွေဟာ ပါစင်နယ်နဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ခွဲဖို့ခက်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့အတွက်က ပါစင်နယ်နဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်က တထပ်တည်းနီးပါး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဥပမာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ မြန်မာပြည်ဆိုတဲ့ အမှတ်အသားကို သူများက မြင်သွားတတ်တာမျိုးပါ။ အဲဒီမှာတော့ ပါစင်နယ်လည်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပါပဲ။ အမှန်တော့ သူ့ပို့စ်မှာ ပေးမလို့ပါ။ ကိုယ်က ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ပြောထားခါစမို့ အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတွေကို အားနာလို့ ဒီနေရာက ကွန်မန့်ပေးတာပါ။
ဂဏန်းတစ်ကောင်က သူ့ကိုယ်ပိုင်ကျင်းထဲကိုဝင်ဖို့ အတော်လေးကြိုးစားရတယ်ဆိုတာပါ…
ခင်ဗျား နည်းနည်း ရှင်းရှင်းလေးပြောရင် ကောင်းမယ်။ ခင်ဗျားပြောတာ ကျုပ်နားမလည်ဘူး။ ကျုပ်က ဥဏ်သိပ်မမီဘူး။ စောင်းပြောရင်လဲ တည့်တည့်ပြောဗျာ။ ဘာမှန်းကို မသိဘူး။
အဓိက အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းကတော့ သဂျီးမင်းခင်ညာ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိ ကျနော့်ရဲ့ မေးထဲကို ကွန်မန့်အသစ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ကိုပေါက်နဲ့ ဟောဒီ ကိုဇမ္ဗူ့လောကပါလ ကြောင်ဝတုတ်တို့ရဲ့ ကွန်မန့်တွေ မဝင်တယ်မသိ။ မဝင်တော့ပါဘူး။ တချက်လောက် ကျေးဇူးပြုပြီး အော်တိုမက်တစ်စက်ကို စစ်ပေးတော်မူပါ။
အယ်ဒီတာတယောက်အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တေ့ာ.. ဒီပို့စ်ဟာ.. ရွာသားတဦးဖြစ်တဲ့.. FR ကို ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ.. မှတ်ချက်/ထင်မြင်ချက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့.. စည်းကမ်းဖြစ်တဲ့..
စည်းကမ်းကို နားလည်နိုင်ကြပါစေ.. :buu:
ကော်မန့်တက်ရင် ကိုယ့်ဆီအီးမေးလ်ဝင်မ၀င် တခြားရွာသူားများလည်း အသိပေးစေလိုပါတယ်..။ ဆာဗာကတခါတလေ..” ကြောင်”တတ်တာမို့ပါ.. :harr:
သူကြီးမင်းရဲ့ စည်းကမ်းချက်ရဲ့ ဝေဝါးမှုနဲ့ ကိုယ်လိုရာဆွဲနိုင်မှုတွေကို ပြောထားပြီးသားပါ။ သူကြီးက ရွာသားတွေကို စည်းကမ်းကို နားလည်နိုင်ကြပါစေလို့ ပြောသလို ကျနော်ကလည်း သူကြီးကို ကိုယ်ထုတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းကို တိတိကျကျ လိုက်နာတတ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။(စည်းကမ်းကို သရေကြိုးလို လိုသူကိုတမျိုး မလိုသူကိုတမျိုး အတင်းအလျှော့ မလုပ်မိပါစေနဲ့ ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။)
ကျနော်ကတော့ ကျနော်ဝေဖန်တာ သိပ်ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျတယ် ပါစင်နယ် မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ ပြင်းကောင်း ပြင်းမယ်။ နိုင်ငံတကာမှာလဲ ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာကြီးတွေတောင် ပြင်းပြင်း ဝေဖန်ခံရတာ ခံရဖူးကြောင်း သိရတယ်။ နောက်ပြီး လူရဲ့ နာမည်ကို လုံးဝရေးမထားပါဘူး။ သူကြီး ပြောချင်သူရဲ့ နာမည်ကို ပြောတာတော့ သူကြီးရဲ့ သဘောထားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုပါတော့။ ကျနော်ဟာ ကျနော့် ဆောင်းပါးတပုဒ်မှာ တဘက်ဆောင်းပါးရှင်ရဲ့ အရေးအသားနဲ့ သဘောထားတွေကို ဝေဖန်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝေဖန်ရတဲ့ အကြောင်းကို ရှင်းရှင်းကြီး ပြောသလို တဘက်လူရဲ့ ဆောင်းပါးထဲမှာ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် မယူရဲတဲ့ စာသားတွေ ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြီး အများကို ရန်တိုက်ပေးတဲ့ စာသားတွေကို စာလုံးမည်းနဲ့ပါ ပြပြီးမှ ဝေဖန်တာပါ။ ဘယ်သူမှလည်း မဟုတ်ပါဘူးလို့ကို မပြောနိုင်တော့ပါဘူး။ တဘက်လူလဲ အဲဒီလို စာတွေကို တကယ်ရေးလို့ စိတ်ထားလည်း မမှန်လို့ ဝေဖန်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းပေမယ့် တဘက်လူရဲ့ ဆောင်းပါးပါ အရေးအသားနဲ့ အာဘော်တွေကို ဝေဖန်တာဖြစ်လို့ လုံးဝ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စည်းထဲမှာ ရပ်ပြီးမှ တိုက်ခိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူကြီး မေ့နေပြီလား။ အဲဒီ တဘက်လူက သူ့ဆောင်းပါးမှာ ကျနော့်ရဲ့ ကလောင်နာမည်ကိုပါ ထည့်ရေးပြီး အားလုံးနဲ့ ရန်တိုက်ပေးခဲ့တာလေ။ အချက်အလက်တွေ မှားပြီး ဒီလောက် ကိုယ်လွတ်ရုန်းတဲ့ စာသားတွေ ရှင်းရှင်းကြီး ပါတာတောင် သူကြီးတောင် ကြိုက်လှချည်ရဲ့ ဆိုပြီး စတစ်ကီ ပေးခဲ့သေးတယ်လေ။ ကျုပ်က အဲဒီတုန်းက ရေးခါစလေး။ ကျုပ်သာ မခိုင်မာရင် ကောင်းကောင်းကြီး အဆဲခံရပြီး အားလုံးကို ဆောင်းပါးနဲ့ပါ တောင်းပန်ရမယ့် အချိုးမျိုး။ ကျုပ်က ရှင်းနိုင်လို့ တဘက်က ကိုယ့်ရှုးကိုယ်ပတ်ပြီး ခံရတော့မှ ရွှေပြည်အေးဆောင်းပါးတွေ ထွက်လာတာလေ။ ကျုပ်က သိပ်မှတ်ဥဏ် ကောင်းတယ်။(အဲဒါတော့ ကြွားတာမဟုတ်ပါ အပြင်မှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ဟဲ ဟဲ)
နောက်ပြီး ကျုပ်ကို ရေးထားမှန်း သိပေမယ့် ကျုပ်နာမည် မတပ်လို့ ကျုပ်လုံးဝကို ဂရုမစိုက်ပဲ မသိယောင်ဆောင်တာတွေလည်း အများကြီးပါ။ သူကြီးက ပိုသိမှာပါ။ ကျုပ်မသိဘူးလို့ မပြောနဲ့ သူကြီး ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူကြီးက အယ်ဒီတာလေ။
အဲဒီတော့ သူကြီးရေ ကိုယ်က သူများကို ဝေဖန်တာ သူများတောင် အရေထူသေးရင် ကိုယ်လည်း အရေထူရမှာပေါ့ဗျာ။ အော် ကိုယ်ရည် သွေးအုံးမယ် သူကြီးရေ ကျုပ်က ဒီနေ့အထိ အတွေးအခေါ် ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ တဘက်လူရဲ့ အယူအဆကို ဖျက်ရင် ဘာကြောင့် ဖျက်ရတယ် ဆိုတာပါ ပြောပြီး စကားကိုလှည့်ရင် လှည့်တဲ့ စကားကိုပါ မူလနေရာကို ပြန်ဆွဲလိုက်တာ သူကြီး။ လိုအပ်ရင် challenge ပါလုပ်သေးတယ်။ သူကြီး သိမှာပါ။ အဲဒီတော့ ပြင်းပေမယ့် လုံးဝ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စည်းပေါ်က ရပ်နေတာပါ သူကြီး။ ပြောချင်တာ ပြောရလို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ။
ဆာဗာက ကြောင်တတ်တာတော့ သူလည်းလေ သင်္ခါရပဲကိုဗျ။